Ny famafazana lena amin'ny ambongadiny dia misy vitamina E sy C Fampitomboana ny otrikaina amin'ny tarehy tarehy Mpamatsy sy mpanamboatra | tsara kokoa
Anaran'ny vokatra: Ny fanadiovana sy ny fanalana makiazy dia mamafa amin'ny vitamina e, vitamina c
Model Model: QMSJ-310
Fangaro: Aqua, Glycerin, Tocopheryl (Vitamina E), ChamomillaRecutita (matricaria) fitrandrahana voninkazo, Alikaola Cetearyl, Cetearyl isononanoate, Glyceryl Stearate, Cetyl Palmitate, Butylene Gylcol, Disodium EDTA, Ceteareth-20, Ceteareth-12, ProplyeneCly Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Vitamin C
Sombiny isaky ny seta: Sasao 30 isaky ny fonosana 60 soloina tanteraka
Fampiasana manokana: Diovy, esory ny makiazy, fafao ny tavanao.
MOQ: 5000 napetraka
Ity famafana fanesorana makiazy ity dia misy hamandoana antonony, lamba landihazo malefaka ary habe mety aminy. Malemy sy tsy mahasosotra, azo ampiasaina amin'ny hoditra mora tohina koa izy io. Ny soloina fanesorana makiazy voajanahary dia manana endrika lehibe kokoa, ary ny ravina iray dia afaka manala ny makiazy amin'ny tarehy iray manontolo, izay mety sy haingana. Manankarena vitamina, malefaka sy marevaka amin'ny hoditra, fafao ny famoahana makiazy tsy alikaola, eny fa na ny mascara aza dia azo esorina mora foana. Misy akora vita amin'ny voasarimakirana, lamba famaohana fanadiovana fanosotra amin'ny makiazy, mampamirapiratra sy mahavelona ny hoditra aorian'ny fanesorana makiazy, ary ny endrika tsy toa maizina.
Manao veloma ny manahirana, fanesorana makiazy mora kokoa sy mety kokoa. Ahitana mpanala makiazy manankarena izay manala moramora ny residu makiazy nefa tsy misintona ny hoditra, ka mamela ny hoditry ny hoditra. Mamafa rano hanala makiazy.
Fitaovana landihazo madio tsara kalitao, firafitra tsara, malefaka ary mahazaka ranomaso, mora ampiasaina ary tsy mora simba. Karazan-damba tsy tenona telo miaraka amina firafitra samihafa no azo fidina. Lamba tsy tenona tsotra, embossed tsy vita tenona, perla tsy tenona.
Lamba tsy manenona vita amin'ny tany lemaka: dingana tsotra sy vidiny ambany.
Lamba amboradara vita amin'ny lamba tsy vita tenona: ny taratasy tavy mando dia voaravaka lamina tsara tarehy, izay tena tian'ny vehivavy tia zavatra tsara.
Lamba perla tsy lamba tsy tenona: ny lamba tsy tenona dia hanana tandroka voa toy ny voahangy. Izy io dia afaka mampitombo ny fikorontanana mandritra ny fampiasana ary manatsara kokoa ny vokatra fanadiovana.
Ho an'ny fampiasana ivelany ihany. Aza mifandray amin'ny maso raha sendra misy fiatraikany ratsy dia ajanony ny fampiasana ary mifandraisa amin'ny dokotera. Aza miditra amin'ny ankizy. Aza mitahiry hazavan'ny masoandro mivantana na mari-pana ambony. Aza mibontsina.
Teo aloha: Ny zaza azo ovaina biodegradable azo soloina ao an-trano Tsy misy fofona
Manaraka: Factory OEM 80 hamafa kitapo fanadiovan-tsakafo isan-karazany 75% hamafa toaka
Ny fanesorana ny famonoana makiazy anti-taona
Ny famafana endrika tsara indrindra ho an'ny mason-koditra
Hamafana makiazy tsara indrindra ho an'ny mascara
Ny fanadiovana sy ny fanadiovana makiazy dia mamafa amin'ny otrikaina E.
Lamba famafana fanadiovana remover
Fafao voafafa voafafa voajanahary
Famafana fanesorana solika tsy alikaola
Top 10 hamafa endrika fanesorana makiazy
Famafana miorina amin'ny rano miorina amin'ny rano
Famafana rano hanala ny makiazy
Ny hatsaran-tarehy tsy misy fangarony vita amin'ny volon'ondry vita amin'ny volotsangana
Manadio sy manalefaka ny spascription mihetsika ...
Manatsara ny hoditra marefo marefo malala hoditra ...